Waxaan falanqeyneynaa SanDisk Connect Wireless Stick, USB-ka wireless-ka ah ee loogu talagalay Android iyo IOS | Wararka Gadget
Xavi Carrasco | | Gargaarka, Reviews
Sida inbadan oo idinka mid ah ogtahay oo laga yaabo inay dhibaato ka soo gaarto, waxaa jira tiro badan oo soosaarayaal ah oo doorta inaysan ku qalabaynin taleefannadooda aaladda fidinta micro SD, dhibaatada dhabta ah ee dadka isticmaala kuwaas oo inta badan gacanta ku haya tiro badan oo feylal badan ah, ha ahaadaan fiidiyowyo sawiro ama muusig. Iyada oo la SanDisk Connect wireless ul, waligeed sidaas ma ahayn fudud ballaariyo awoodda taleefankeenna.
Qalabkan ay dhistay SanDisk, wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku raaxeysano dhamaan noocyada kaladuwan ee warbaahinta badan si silig la'aan ah iyada oo loo marayo codsigeeda laga heli karaa labada Android iyo macruufka. SanDisk waa shirkad awood badan oo fadhigeedu yahay Kaliforniya kuna takhasustay soo saarista Flash Drive-keeda. Rsi hufan waxaa iibsaday Digital Digital, soo saare darawallada adag ee adduunka, oo taariikh dheer ku leh warshadaha korantada. Nooca SanDisk ee aadka caan u ah tayada wax soo saarkiisa ayaa magaciisa ku sii hayn doona Galbeedka Digital Corporation.
1 Naqshad jilicsan iyo dhismo adag
2 Isticmaalka SanDisk Connect Wireless Stick waa mid aad u fudud
3 SanDisk APP waa mid aad u fudud oo dareen leh in la isticmaalo oo leh shaqooyin aad u faa'iido badan.
4 SanDisk Connect Wireless Stick sidoo kale wali waa ul USB ah
5 Ilaa saddex qalab oo isku mar isku xiran
6 Is-xukunka aaladani waa 4.5 saacadood
7 Waxaa lagu heli karaa cabirro kala duwan, 16GB, 32GB, 64GB iyo 128GB
Naqshad jilicsan iyo dhismo adag
Qalabka dhisay en polycarbonate madow waxay soo saartaa xarrago iyo tayo, wejiga hore waxaan ku arki karnaa naqshad hexagons ah oo leh gargaar abuuraya qaabab cube ku xiran hadba sida iftiinka u soo dhaco, faahfaahin siinaya shakhsiyadda unugga, maadaama SanDisk uu caadaystay khadkeeda wax soo saarka, sida SanDisk Ultra-USB. Dhinaca hore ayaa ka muuqda hogaan cad muxuu na siin doonaa -celin ku saabsan waa maxayá ku dhacaya qalabka. Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan hoggaankan cad ayaa ah in gabi ahaanba aan la fahmi karin haddii uu xirmo Isku-xidhka Isku-xidhka. Dhinaceeda midig waxaan ka helaynaa el badhanka dabka shidid, fábaalal-il riixid y leexo adagbaalal-il of this dhacaya by baadi. Dhinaca hoose ee gadaasha, waxaan dhigi karnaa loop, si aan ugu dhajino furayaasheena ama meelkasta oo noogu fiican, waa muuqaal caadi ah oo ulaha USB-yada caadiga ah ee SanDisk ay rabeen inay ku sii hayaan qeybtooda wireless-ka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah u xuso daboolka, maadaama loo dhisay laba qaybood, midkood, la dibadda, es caag ah thufan ee iska caabin weyn iyo kale, la gudaha, waa kulmayáBeen y borotiinge nooca USB A isku xira. Haddii aad lumiso daboolkan waxaa hubaal ah inay sabab u tahay qaladkaaga, maaddaama ay si fiican ugu habboon tahay oo ficil ahaan aan macquul ahayn inay ka dhacdo.
Qiyaasaha del SanDisk Connect wireless ul uu 191mm ballaaran, 762mm dheer y 95mm qaro weyn. Waxyaabaha ka weyn qandaraasyada caadiga ah ee aan hadda ka heli karno suuqa, laakiin tixgelinta in ay ku jiraan baytariga, anteeno iyo kantaroole Wifi hoostiisa, waa mudnaan in ay sii ahaato mid la maamuli karo. Taabashada iyo culeyska waxaad u sheegi kartaa inuu dareenku wanaagsan yahay, iyo in dareen adag.
Isticmaalka SanDisk Connect Wireless Stick waa mid aad u fudud
Hantida ugu weyn ee SanDisk Connect Wireless Stick waa shaki la’aan xiriirkeeda wireless-ka ah ee la jaan qaadaya macruufka iyo Android iyada oo loo marayo APP gaar ah, waana sida aan kor ku soo sheegnay. isticmaalka qalabka waa mid aad u fududWaxaan kaliya u baahanahay inaan riixno badhanka korontada ee dhinaca iyo ka helitaanka terminaalkeena ama kiniinkeena raadinta oo aan ku xirno shabakada Wifi ee Udadka Wireless ay bixiso Sida iska cad gadaal waan badali karnaa SSID (magaca shabakadda) oo u yeelo lambar sir ah si kaliya cidda aan dooneyno inaan ku xirno.
SanDisk APP waa mid aad u fudud oo dareen leh in la isticmaalo oo leh shaqooyin aad u faa'iido badan.
Marka la isku xiro, waxaan ka heli karnaa waxyaabaha ku jira SanDisk APP, tani waxay gaar u tahay iskuxirka 'Wireless Connect'. PNasiib wanaag waa wax aad u fudud oo macquul ah in la isticmaalo. Tusmada dalabka waxaan kaheleynaa shaqooyin aad ufiican, sida iskuxirka SanDisk Connect Wireless Stick iyo shabakad Wifi maxalli ah, taas oo noo oggolaan doonta inaan ku xirnaano aaladda isla waqtigaas ma khasaarayno la isku xirnaansho anigantinternetka de noo Whaa. Muuqaal kale oo aad u qadarinaya dadka isticmaala ee siiya kamaradooda casriga ah wax badan oo la isku qurxiyo ayaa ah in la sameeyo keydinta vuestra sawir muuqaal, ku habboon in sawirrada loo wareejiyo kombuyuutarka oo lala shaqeeyo ama si fudud loo sameeyo keyd.
SanDisk Connect Wireless Stick sidoo kale wali waa ul USB ah
Hal dhibic oo laga raalli yahay ayaa ah in wadista baabuurkan SanDisk Connect uu wali yahay USB 3.0 pendrive, kaas oo leh waxaan kula xiriiri karnaa kumbuyuutarka isla markaana si raaxo leh ugu soo dejin karnaa faylasha inaad halkan ka kaxeyso oo aad ka qaadato ama aad uga raaxaysato taleefankeena casriga ah.
Ilaa saddex qalab oo isku mar isku xiran
Tani waa hab ku habboon in la helo adeege yar in lala wadaago dhammaan noocyada feylasha gudaha. Illaa iyo hadda, wadarro fara badan oo shaqeynaya iyo suurtagal isku xirnaanta oo na siineysa koror ballaaran oo wax soo saar labada xirfad-yaqaan iyo adduun shaqsiyadeedba.
Is-xukunka aaladani waa 4.5 saacadood
Xaaladaheeda ugu wanaagsan, oo leh hal aalad oo isku xiran waxaan haysan doonaa 4.5 saacadood oo adeegsi joogto ah, runti tan ma aha dhibicdiisa xoogan, laakiin heerka wax kala iibsiga yar-yar, gelitaanka faylka afar saac iyo badh waa wakhti dheer, iyo waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan daawanno filim dhan walwal la'aan.
Amraya waa mid dhakhso badan 2 saac gudahood waxaan ku haynaa cutub 100% dabcan waxaan ku xiri karnaa god ama baanka korontada si loo kordhiyo saacadaha isticmaalka inta aan u baahanahay.
Waxaa lagu heli karaa cabirro kala duwan, 16GB, 32GB, 64GB iyo 128GB
SanDisk Connect Wirless Stick waxaa lagu heli karaa awoodo kala duwan qiimo macquul ah marka la fiiriyo qeexitaankiisa iyo kartidiisa. 16GB € 30, 32GB € 40, 64GB by 50 € iyo 128GB € 80.
Naqshad wanaagsan iyo iska caabin
Isku xirnaanta weyn
Ficil iyo waxqabad badan
SanDisk Ku Xidhnow Udgoon Wireless
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Gargaarka » Waxaan falanqeyneynaa SanDisk Connect Wireless Stick, USB-ka wireless-ka ah ee loogu talagalay Android iyo IOS